Yintoni "umlinganiso wegolide" kunye nendlela yokwenza okungcono ngayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
La Ubume bokufota yenye yeempawu ekufuneka zithathelwe ngumfoti Ingcali eziqhayisa ngayo. Kukho uthotho lwemithetho encedisa ukuqamba loo ndawo okanye ukubamba loo mzuzu apho uthotho lweemeko zihlangana khona ukuze, enkosi kwiliso lethu lobuchwephesha, sinokuthatha umfanekiso osisa kumfanekiso wentle entle.
Omnye wazo imigaqo yeyesithathu okanye enokubizwa ngokuba ngumlinganiso wegolide. Kwaye ayisiyondlela yokuqonda ukubekwa kothotho lwezinto kwifoto eyazalwa kwiminyaka eyadlulayo, kodwa kwiinkulungwane ezidlulileyo. NguLeonardo Pisano, okwabizwa ngokuba nguFibonacci, owadiza lo mthetho, owawusithi ngelo xesha ingcali yezibalo yase-Italiyane ibizwa ngokuba yiFibonnaci Succession, nesiyazi namhlanje njengegolide.
1 Uthini umlinganiselo wegolide?
2 Imbali yeRatio yeGolide
2.1 Kuyilo lwamaGrike
2.2 Isidlo sangokuhlwa sokugqibela
3 Inkqubo yokudala uxande kunye nomgangatho wegolide
4 Sebenzisa uxande olwenziweyo
5 Iinqwenela malunga nomlinganiselo wegolide
6 Izixhobo zewebhu zeRatio yeGolide
6.1 Igolide yeRatio typography Calculator
6.3 Yabela icandelo leGolide
Uthini umlinganiselo wegolide?
Ngokwenene luluhlu lwamanani: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, njl.. Luthotho olungenasiphelo apho isibalo samanani amabini afunyanwa ngokulandelelana, siyakuhlala sikhokelela kwinani elilandelayo. Oko kukuthi, 1 + 1 = 2; 2 + 13 = 3, njalo njalo ngokungapheliyo. Phakathi kwamanani amabini alandelelanayo kukho ubudlelwane obusondeleyo kunani legolide, okanye u-1,168034, ngokuchanekileyo ukuba yintoni unobumba uPhi woonobumba besiGrike.
Njengoko abaninzi besitsho, imathematics yinto yonke kwaye kufanelekile ukuzibuza Zisetyenziselwa ntoni ezi ngxelo malunga nokuba ingaba sisicelo sazo kubugcisa. Kuya kufuneka sijongane noxande apho amacala alo alinganisa amanani amabini kuluhlu lweFibonacci.
Into esimele ukuyenza Yahlula amanani amabini emacaleni ukwahlula uxande kwaye iya kuba yile ilandelayo:
Thina kuphela Kuya kufuneka ukrwele umgca odibanisa zonke ezo zikwere zincinci. Kukulo moya ubizwa ngokuba yiGolden Spiral okanye iGolden Spiral, kwaye, ngendlela enomdla kakhulu, singayifumana ngeendlela ezininzi kwindalo. Kufuneka sijonge nje, kwaye siza kubona ukuba imbewu kajongilanga ilandela imigca yeGolden Spiral kakhulu.
Kwaye kulapho singena khona umxholo wale nto siyisebenzisayo kuzo zonke iintlobo zeefomathi zobugcisa. Ukubonakala ngokulinganayo kwendalo, imifanekiso equlunqwe naloo mzila wokujikeleza iya kuba ikwazi ukutsala amandla abaphulaphuli. Kwaye njengalo naliphi na isebe lobugcisa, akufuneki sixhomekeke kulo mthetho, onokwaphulwa, kodwa usebenza njengesikhokelo sokuqala umsebenzi, uhlala uvuleleke kulungelelwaniso esicinga ukuba lunokufika ngokufanelekileyo.
"Umlinganiselo wegolide", njengoko ubizwa njalo ngesiNgesi, unjalo malunga nomyinge olingana no-1: 1.61 kwaye sinokuyimela nge "xande legolide", equlathe isikwere kunye noxande oluncinci. Ukuba sisusa isikwere kuxande, siyakushiyeka no "xande lwegolide." La manyathelo anokuqhubeka ngokungapheliyo, njengamanani eFibonacci, asebenza umva.
Imbali yeRatio yeGolide
Kufanele si buyela emva kwiminyaka engama-4.000 XNUMX eyadlulayo xa kwaqala ukusetyenziswa iRatio yeGolide. Kwaye ukuba abanye ababhali-mbali babuyela kumaYiputa amandulo, awayesele ewusebenzisile lo mthetho-siseko ukwakha iipiramidi. Okwangoku sinokuyifumana kuyo yonke imiba yobugcisa, ukusuka kumculo, uyilo okanye umzekeliso. Ngokusebenzisa le ndlela yokusebenza, ungazisa izinto ezifanayo kuyilo emsebenzini wakho.
Kuyilo lwamaGrike lo mlinganiselo wawusetyenziselwa ukumisela ulwalamano olufanelekileyo kunye nolwalamano phakathi kobubanzi besakhiwo nokuphakama kwaso, ubungakanani beplanda kunye nokuma kweentsika, ezo zixhasa bonke ubunzima kunye nolwakhiwo ngokwalo.
Isidlo sangokuhlwa sokugqibela
Omkhulu uLeonardo da Vinci, njengamanye amagcisa amaninzi, usebenzise "umlinganiselo wegolide" kulo msebenzi owaziwayo. Amanani abonakalisa ukwakhiwa athatyathwa angaphantsi kwesibini kwisithathu, kwaye isikhundla sikaYesu sime ngokugqibeleleyo ukuze silingane nomlinganiso weGolide kuyo yonke indawo.
La Indalo isebenzisa lo mgangatho wegolide njengophawu lwayo yendlela esebenza ngayo yonke le ndlela. Sibona kuyo yonke indawo, njengoko ividiyo ibonisa, njengeentyatyambo, oonombombiya okanye oonokrwece baselwandle.
Inkqubo yokudala uxande kunye nomgangatho wegolide
Into yokuqala kukuzoba isikwere.
Into elandelayo yohlulahlula kubini.
Se zoba idayagonal ukusuka kwenye yeekona zeziko, enye ingezantsi, kwelinye kwikona ejongene nayo.
Sijikelezisa idiagonal ukuze ibonakale ithe tye kufutshane noxande wokuqala.
Sakha uxande olusuka kumgca omtsha othe tyaba kwaye ulandele uxande oluthe tyaba.
Sebenzisa uxande olwenziweyo
Ulawulo lwesithathu Isikhokelela ekwahluleni indawo ibe ngamalungu amathathu alinganayo ngokuthe nkqo nangokuthe tye. Kukudibana kwemigca ebonisa indawo ekugxilwe kuyo kwindalo. Kwaye ngamagcisa okanye abafoti abafaka eyona nto iphambili kulwakhiwo lwabo kwenye yezo ndlela zinqamlezayo ukwenza loo ndawo ikholisa kakhulu kumbukeli.
Le ndlela inokuba njalo isetyenziswe kwisitayile esibonakalayo samaphepha ewebhu, i-mockups kunye noyilo lweeposta okanye intengiso. Ukuba sele sisebenzisa umthetho wesithathu kwisilinganiselo segolide, esingu-1: 1.6, siya kuba kufutshane kakhulu noxande lwegolide, oluya kwenza umbono wakho ube mnandi ngakumbi.
Kuyilo lwewebhu sinomzekelo omangalisayo kwaye esiqhelene nawo. Kwelinye icala sinalo lonke ufikelelo kwiiwijethi kunye neemenyu, ngelixa kwelinye icala, isikwere esikhulu, simi ngokugqibeleleyo kumxholo. Ukuba besinendawo yomxholo wepikseli engama-640, icala leepikseli ezingama-400 belinokulingana ngokugqibeleleyo kwiRatio yeGolide. Singasoloko sisebenzisa kwahlulo olufanayo kwizikwere phantse ngokungenamda, okoko nje sinokubabona ngaphandle kokucinezela amehlo ethu.
Iinqwenela malunga nomlinganiselo wegolide
Ulandelelwano lwe-Fibonacci, i-arithmetic ehambelana nenombolo yegolide, inomdla onomdla kwaye kunjalo inxulumene nokuzaliswa kwemivundla ephakanyiswe nguLeonardo Pisano Bionacci ngokwakhe Kwincwadi yakhe ye-Abacus ngo-1202.
¿Zingaphi izibini zemivundla esiya kuba nayo xa kuphela unyakaUkuba siqala ngesibini esivelisa enye inyanga nenyanga kwaye sivelisa kwinyanga ezimbini ubudala? Impendulo yenyanga nenyanga yile: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 no-144.
Inani legolide linomdla kuba kunjalo ikwazi ukufunyanwa ngokwendalo ngokwayo, nanjengoko kusenzeka phakathi kweenyosi zamabhinqa nezimatsayo, kwindawo yeenyosi edla ngokuba nomlinganiselo wegolide.
Olunye ulwazi, kwaye oluhambelana nomzimba womntu, lukwazi ukumisela ukuba isibeleko somguli sibonakala siqhelekileyo xa usebenzisa umlinganiso wegolide. Ukuphakama kwayo kwahlulwe ngobubanzi bayo, ukuze iziphumo zikufutshane ne-1,618.
Ukuba sijonga kubugcisa, ngaphakathi kwentshukumo ye cubism, kukho iCandelo leGolide. Eyona nto kugxilwe kuyo yayikukuzisa imathematika kupeyintiweyo, kwaye umbono yayikukubola amanani abe ziityhubhu. Omnye wabazobi abanxulumene neli candelo yayinguMarcel Duchamp, nangona sikwanayo noJuan Gris omkhulu.
Enye enkulu U-Antonio Stradivarius wasebenzisa umlinganiselo wegolide ukubeka ukuvuleka kwiivayolin zakhe ukulingana nelo nani. Into engaziwayo kukuba imeko yokuvulwa inento yokwenza nomgangatho wesandi, nangona kubonakala ngathi yayiyeyona nto ibubuhle.
Sigqiba ngolunye ulwazi kwaye siya ngqo kwimarike yemasheya kunye nexabiso lemarike yemasheya. Phakathi kwezixhobo ezenziwa ngabahlalutyi ukuze baziphathe ngendlela yokhuseleko, kukho uqikelelo lweFibonacci. Zisetyenziselwa ukumakisha amanqanaba kwaye ke ngoko zazi zombini ukunyuka okunyukayo njengasezantsi komlambo.
Izixhobo zewebhu zeRatio yeGolide
Igolide yeRatio typography Calculator
Sijongene nesixhobo sewebhu ikuvumela ukuba ufumane ukuba yeyiphi ifonti efanelekileyo kwiwebhusayithi yethu. Kuya kufuneka singenise ubungakanani befonti kunye nobubanzi bomxholo kwaye siya kufumana umlinganiso ogqibeleleyo wokuchwetheza ngenxa yoko.
Enye yexabiso laso kukukwazi yenza ubungakanani bokubhala ngokusekwe kubungakanani befonti, ukuphakama komgca, ububanzi kunye nabalinganiswa kumgca ngamnye, ke sisixhobo esinexabiso ekunikezeleni olo cingo kwiwebhusayithi yethu, ukuba singabaphuhlisi.
Singasebenzisa ngokulula ngokufaka ubungakanani befonti, ububanzi bomxholo, okanye zombini. Sinokungenisa ixabiso le-CPL, kwaye baya kusinika amaxabiso ukuze sisebenzise abalinganiswa kumgca ngamnye. Isicelo esinomdla sokusebenzisa ngokupheleleyo umlinganiso wegolide kuphuhliso lwewebhu.
NgePhicalculator sijamelene ne iwijethi yeMac OSX enike inani, iya kuba nakho ukubala ixabiso engqinelanayo xa usebenzisa umlinganiselo wegolide. Sisibali-manani sesalathiso esiya kusebenza kulo naluphi na uhlobo lomsebenzi esiza kuwenza. Oko kukuthi, sazisa naliphi na inani, kwaye apha ngezantsi siya kuba nesiphumo negolide. Ayinakuba lula.
Yabela icandelo leGolide
Enye inkqubo esebenza ngokugqibeleleyo njenge isixhobo sokuyila samagcisa, abayili, abenzi benkqubo kunye nabafoti. Ngokungafaniyo nezixhobo zewebhu ezimbini ezidlulileyo, apha kuya kufuneka sikhuphele isilingo sasimahla seentsuku ezingama-30 okanye sithenge ngokuthe ngqo.
Ingasetyenziselwa nayiphi na inkqubo yoyilo kwaye ibonakaliswe fumana ubungakanani obugqibeleleyo kunye neemilo ukuze ufumane isakhelo esifanelekileyo kwifoto, umzekelo. Iyafumaneka kuzo zombini iiWindows kunye neMac OS.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Umlinganiselo wegolide
UEdwin Cadena Moreno sitsho
Ukudityaniswa okugqwesileyo. Enkosi.
Phendula uEdwin Cadena Moreno
Yintoni incwadi yomculi kwaye inokukunceda njani ukuba ungumdali
Imibhalo engaphezu kwe-1.000 XNUMX enemifanekiso emihle yaseJapan ngoku iyafumaneka kwi-Intanethi